Isku aadka rubac dhammaadka koobka FA-ga oo la sameeyay
Manchester United ayaa waxa ay rubac dhammaadka koobka FA-ga kula dheeli doontaa kooxda Brighton.
18 Febraayo 2018
Hargeysa oo tartan Marathon ah uu ka furmay
Waxaa goor dhoweyd saaka oo Jimce ah ka bilaabmay magaalada Hargeysa Orodka Marathoonka ee 42KM iyo 10KM.
Uefa oo ka dalbatay garsoorayaasha inay ilaaliyaan ciyaartoyda
Ururka xiriirka kubadda cagta ee Uefa ayaa ugu baaqay garsoorayaasha in ay ilaaliyaan ciyaaryahanada dhaawaca loo geysto xili ciyaareedka.
Kulammada Premier League ee Sabtida
Maanta waxaa la dheelayaa kulamo muhiim ah oo ka tirsan Horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga.
Chelsea ma waxey dooneysa weeraryahanka Arsenal ee Giroud?
Ma dhici kartaa in uu Chelsea aado? Taageerayaasha Arsenal - ma aqbalaysaan in laba ciyaaryahan oo muhiim ah aad bil gudaheed ka iibisaan laba kooxood oo loolan uu idiinkala dhexeeyo?
26 Jannaayo 2018
Mkhitaryan oo ogolaaday inuu Arsenal u wareego iyo Sanchez oo u dhaw inuu ku biiro Man Utd
Ciyaaryahanka khadka dhexe uga dheela kooxda Manchester United, Henrikh Mkhitaryan, ayaa waxa uu ogolaaday inuu ku biiro kooxda Arsenal, halka Alexis Sanchez lagu wado inuu dhinaca kale u dhaqaaqo.
Daawo: Wasiir Beyle oo difaacay canshuurta ay xukumaddu soo rogtay